Iingcali ZeProjekthi YeziXhobo ZokuNgenisa UMoya NooNonjineli
I-Kooltron yinkampani yoononjineli yaseKapa enokuyila, ihlengahlengise okanye iphucule naziphi na izixhobo zokungenisa umoya zemizi-mveliso ephakathi nemikhulu ezilungele iimfuno zomthengi lowo.
Njengoko inguMvelisi oThe Ngqo weziXhobo (OEM), iqela labasebenzi eliphum’ izandla ngobugcisa lakwa-Kooltron kunye nendawo yalo yokusebenzela enezixhobo ezaneleyo isenza sikwazi ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophakamileyo ngamaxabiso afikeleleka kumntu wonke.
Ukukhetha kwii-Softwe zeFeni ezingooMabizw’ asabele ezifumaneka SIMAHLA
I-Kooltron inesixhobo sokukhetha ifeni engumabizw’ asabele (interactive) ngenjongo yokukwenzela lula izinto xa u-odola. Wena faka nje izinto ozikhethayo yaye le softwe iya kuvela ikubonise ifeni ekulungeleyo.
Le softwe ikuvumela ukuba uhlengahlengise izinto ozikhethayo kwikopi eprintekayo yomgama osuka embindini ukuya emacaleni (fan curve). Usakube uxolile, uvela nje uthumelele abakwa-Kooltron leyo uyikhethayo nge-imeyili ukuze bakunike amaxabiso.
Ngelixa ke ekuqaleni sasivelisa iifeni sisenzela iiprojekthi zethu siya sisenza umtsi obonakalayo kwezorhwebo kwiimveliso yeefeni sisenzela abanye abantu.
I-Kooltron lilungu elibhalisileyo loMbutho weNtsimbi nobuNjineli waseMzantsi Afrika (SEIFSA), iNdibaniselwano yezoRhwebo yeKapa kunye neleBhodi yamaShishini olwaKhiwo noPhuhliso (CIDB) ekuluhlu lwe-M4 ngokoMgangatho.
I-Kooltron yasungulwa ngowe-1968 yaza yathi chu ngcembe ukufumana indumasi njengeengcali ekuveliseni izixhobo zokupholisa ezisebenzisa umphunga. Noko ke, kuthe kula mashumi eminyaka akutshanje, sazandisa iinkonzo zethu saze saziingangalala kuzo zonke izixhobo zokupholisa zemizi-mveliso ephakathi kwanemikhulu ezixabisa ukususela kwi-R10 000 ukuya kuthi xhaxhe kwizigidi ezi-4.8.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, qhagamshelana nathi ngomnxeba okanye nge-imeyili
Ukutshisa nokuQinisa ii-Oveni
UkuSusa uThuli ngesiNgqi esiBuya uMva sokuHluza
INkqubo yokuSusa uThuli ngeNkqubo kaVenturiyokuHluza aManzi
INkqubo yokuSusa iPeyinti
Iimveliso zethu neeNkonzo
Iinkonzo zeziXhobo zokuPholisa nokuSusa izinto
UkuSusa uThuli, iNkunkuma neeNgqushu
IiPleyiti zeNtsimbi neeMveliso zeZinki
IziXhobo zokuPholisa uMoya ongunguMphunga